Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) wuxuu leeyahay jaanis cusub oo Afrikaan ah iyadoo Sacuudi Carabiya ay hormuud u tahay iyo goobta Morocco
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) wuxuu leeyahay jaanis cusub oo Afrikaan ah iyadoo Sacuudi Carabiya ay hormuud u tahay iyo goobta Morocco
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Investments • Shirarka • Moroko News • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Marooko waa dheri dhalaal u ah boqortooyooyinkii iyo dhaqammadii. Waxay ka dhigaysaa magaalada ugu habboon inay dib -u -habayn ku samayso socdaalka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska ee lagu qasbay jilbaha.
Morocco ayaa laga yaabaa inay noqoto waddanka awood u leh inuu saxo khaladaadkii dhacay labadii doorasho ee Xoghayaha Guud ee UNWTO isla markaana dib u dhigay mustaqbalka wakaaladdan ku xiran Qaramada Midoobay oo dib u soo celisay wadadii ay ku lahayd taageerada maaliyadeed ee lagama maarmaanka ah.
Marooko ayaa laga yaabaa inay noqoto goobtii dalxiisku mar kale ku noqdo hoggaamiye dhaqaalaha adduunka iyo qoys caalami ah.
Midda ugu qarsoon, laakiin sidoo kale weligeedba ugu muhiimsanayd, Kulan Guud oo loogu talagalay Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa si aamusnaan ah looga raray Oktoobar 2021 si hadda loo qabto laga bilaabo Noofambar 30 illaa Diseembar 2, 2021, oo ku taal Marrakesh, Morocco.
Dib-u-magacaabista Zurab Pololikashvili oo ah Xoghayaha Guud ee UNWTO muddada soo socota ee 2022-2025 ayaa loo codayn doonaa. Waxaa jira fursad lagu saxo khalad muhiim ah.
U soo wareejinta xarunta UNWTO Madrid, Spain, una wareejineyso Riyadh, Saudi Arabia, ayaa la filayaa in lagu daro ajendaha lana go’aamiyo.
Golaha Guud ee UNWTO 2021, Marrakesh, Morocco
Iyadoo aan la soo saarin wax war -saxaafadeed ah ama ogeysiis ah, xubnaha Ururka Dalxiiska Adduunka ayaa maanta lagu wargeliyay isbeddelka taariikhda la filayo ee Golaha Guud ee 24aad ee soo socda.
GA waxaa loo qaban doonaa sidii markii hore loo qorsheeyey Magaalada Moroccon ee Marrakesh laga bilaabo Noofambar 30 illaa Diseembar 2, 2021. Isbedelka taariikhda ayaa la filayay wuxuuna ahaa sir furan, oo hadda uun la kashifay.
Morocco waa meesha ugu weyn ee safarka Afrika iyo dalxiiska, waana dhibbane COVID-19, sida adduunka intiisa kale.
UNWTO waxaa lagu dhaleeceeyay inay tahay mid aan waxtar lahayn oo aan ka soo bixin caqabadihii dalxiiska adduunku wajahayay tan iyo markii COVID-19 uu soo ifbaxay Maarso 2020.
Morocco kaliya ma noqon doonto goob lagu qabto Shir kale oo Guud. Kaliya laguma martigalin doono waddan u heelan safarka iyo dalxiiska, laakiin sidoo kale waddan martigelinaya dhacdadan muhiimka ah ee ka soo horjeedda dhammaan khilaafyada marka COVID-19 uu gaaro heerkii ugu sarreeyay.
Waxay noqon doontaa dhacdo dowladaha xubnaha ka ah ay ku sixi karaan khalad bilowdey 2018. Sidoo kale waa dhacdo halkaas oo guriga UNWTO laga guuri karo markii ugu horreysay tan iyo markii la hirgeliyay hay'adda gaarka ah ee UNWTO.
Iyada oo ku xidhan arrimahan oo dhan, UNWTO ayaa laga yaabaa inay markii ugu horreysay abid noqoto urur leh maalgelin ku filan, taageero, oo dib loogu soo celiyo hoggaamiye caalami ah iyo ciyaartoy kooxeed oo ka tirsan waaxda dalxiiska dadweynaha.
Si loo helo sharciyeynta, arrinta ku -takrifalka cod -bixinta ee 2017 iyo mar kale 2021 ayaa ugu dambayn wax laga qaban karaa ka hor inta aan la xaqiijin xoghaye guud 2022-2025.
Marooko ayaa noqon doonta meesha kaliya ee Xoghayaha Guud ee hadda aan la isku eedeyn karin iyo garsooraha isku mar.
Sacuudi Carabiya waxay ku noolayd inay noqoto jawaab -bixiye ugu horreeya iyo wax badan oo ka badan safarka safarka iyo warshadaha dalxiiska. Iyada oo balaayiin diyaar u yihiin inay maalgashadaan, tani waa soo-jeedin soo jiidasho leh oo loogu talagalay urur leh miisaaniyad dhan 8 milyan oo doollar, badidoodna waxay ku baxday safarka Xoghayaha Guud iyo saaxiibbadiis. Sacuudi Carabiya ayaa iyaduna dareensan in xarun cusub oo Riyaad ay sugi doonto xasilloonida maaliyadeed ee hay'addan ku xiran Qaramada Midoobay. Sidaa darteed, soo jeedin ah in xarunteeda Madrid laga raro Riyadh ayaa la filayaa in lagu daro ajendaha.
Waqtigan xaadirka ah, ajendahaani wali ma xusin waxaas oo dhan. Hadda waxay ku xiran tahay xubnaha UNWTO inay ajendaha ku dhammaystiraan si habboon. Waxa kale oo ay ku xidhan tahay xubnuhu inay diyaariyaan safarka Marrakesh, sidaa darteed cod ballaadhan oo ku saabsan Arrimaha dalxiiska adduunka ayaa la fududayn karaa lana hubin karaa.
Waxa kaliya oo la rajayn karaa hoggaamiyeyaasha, sidoo kale dhinaca caafimaadka adduunka, warshadaha gaarka loo leeyahay, madaxda ururada, iyo warbaahinta kala duwan, ayaa lagu casuumi doonaa inay ka soo qaybgalaan Shirka Guud. Dalxiiska caalamiga ah wuxuu u baahan yahay hoggaan, Morocco -na waxay haysataa fursad, oo laga yaabo inay tahay fursaddii ugu dambaysay, si loo badbaadiyo Ururka Dalxiiska Adduunka
Ajandaha hadda ee xoghaynta UNWTO :.
Isniin, November 29, 2021
Talaado, Nofeembar 30, 2021
10:00 - 11:00 Barnaamijka iyo Guddiga Miisaaniyadda
10:00 - 11:00 Guddiga Dib -u -eegista Codsiyada Xubinnimada
11:30 - 13:00 kalfadhigii 114aad ee Golaha Fulinta
12:00 - 14:00 43 -aad Fadhiga Guud ee Xubnaha Xiriirka ee UNWTO
14:00 - 15:00 Qado
15:00 - 16:30 Guddiga Dalxiiska iyo Joogtaynta
15:00 - 16:30 Guddiga Dalxiiska iyo Tartanka
15:00 - 17:00 Kooxda ka shaqaysa Xeerka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dalxiisayaasha
15:00 - 18:00 43 -aad Fadhiga Guud ee Xubnaha Xiriirka ee UNWTO
16:30 - 18:00 Guddiga Tirakoobka
16:30 - 18:00 Guddiga Waxbarashada Dalxiiska onlaynka ah
19:00 - 22:00 Soo dhawoow casho
Arbacada, December 1, 2021
10:00 - 10:30 Furitaan rasmi ah
10:45 - 13:15 Kulanka guud 1
13:15 - 13:30 Sawirka kooxda
13:30 - 15:30 Qado
15:00 - 15:30 Guddiga Aqoonsiga
15:30 - 18:30 Kulanka guud 2
20:30 - 22:30 Casho
Khamiista, Diseembar 2, 2021
10:00 - 13:00 Fadhiga mawduuca: Hal -abuurnimada, Waxbarashada iyo Horumarinta Reer Miyiga si Dib -u -dhis wanaagsan loogu sameeyo
13:00 - 14:30 Qado
14:30 - 17:30 Kulanka guud 3
14:30 - 16:30 Guddiga Xubnaha Xiriirka leh
17:30 - 18:30 Kulanka Xubanaha
20:00 - 22:00 Casho
Jimco, Diisambar 3, 2021
10:30 - 12:00 kalfadhigii 115aad ee Golaha Fulinta
12:00 - 12:30 Barnaamijka iyo Guddiga Miisaaniyadda
Booqashooyinka farsamada (TBC)
Riix halkan si aad u hesho xog dheeri ah oo ku saabsan Shirweynaha 24aad ee UNWTO.